China iHDPE i-grooved i-ultra-quiet drainage pipe mveliso kunye nabenzi | Shengyang
IHDPE i-grooved umbhobho wokuhambisa amanzi ongathethiyo
Gcina izinto zokwenza imveliso kunye nelahleko ephantsi
Imibhobho ye-HDPE kunye nokufakelwa konxibelelwano oluqhelekileyo olushushu olushushu ludibaniso lwexesha elinye, kwaye izixhobo azinakusetyenziswa kwakhona. Indlela yoqhagamshelo lwe-groove inokudityaniswa, iinxalenye kunye nemibhobho zinokuphinda zisetyenziswe, zisebenzise ngokupheleleyo izixhobo, ukonga amandla kunye nabasebenzi kunye nezixhobo ezibonakalayo ezifunekayo kusetyenzwa lwesibini; Ngexesha lenkqubo yofakelo, imibhobho yeHDPE idityaniswe ngemilomo ethe tyaba, ngaphandle kwamalungu alelanayo. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zoqhagamshelo, uxhulumaniso oluyingxangxasi oluxineneyo olunokunciphisa inani lombhobho.
Uqhagamshelo uqinisa ezizodwa, ufakelo ngokukhawuleza
Akukho sidingo sokunyibilika kushushu ngexesha lokwakha, kungasikelwanga mda kwimeko yofakelo, imozulu, iqondo lobushushu, njl., Ukufakwa komthwalo kwindawo kuncitshisiwe, kwaye ukusebenza kakuhle kuyaphuculwa. Ngokweemvavanyo zokwenyani, xa kuthelekiswa nemibhobho yentsimbi ebekiweyo, inani elifanayo lobunjineli lifakiwe, kwaye ixesha lokwakha elifunekayo ubuncinci lincitshisiwe ngaphezulu kwesiqingatha. Imibhobho ye-PVC-U ayinakufakwa kubushushu obuphantsi okanye kwimozulu enethayo, olu fakelo lunokwenziwa ngendlela efanayo.
Uyilo lobunzululwazi kunye nolwazelelelo, uhlobo oluthile lwe-C yohlobo lokutywinwa kwerabha ukufezekisa ukutywinwa kathathu, ukuqinisekisa ukuthembeka kwetywina lokudibanisa, kwaye unokuhlawula ngokufanelekileyo ukuphambuka kombhobho kwi-axis.
Umsebenzi olula kunye noqoqosho
Ukufakwa ngokukhawuleza, okususwayo kunye nokugcinwa simahla. Gcina amandla ngaphandle kwethekhnoloji ekhethekileyo. Kuphephe ukusilela kwindlela yoqhagamshelo lwesokethi efuna abantu abaninzi kunye nabasebenzi. Ukufakwa kuyakhawuleza kwaye kulula, okunciphisa kakhulu iindleko zokufaka. Kuba indawo nganye yoqhagamshelo iyindawo yokuhamba kunye nezibuko lolondolozo, inokuqhaqhwa, kwaye inkqubo yombhobho inokwenza utshintsho oluninzi oluguquguqukayo ukuze ikwazi ukuziqhelanisa nekamva ngaphandle kokongeza iindleko.
Inkqubo yoqhagamshelo eguqukayo eguqukayo inokuthintela ukuhanjiswa kwengxolo okuqhubekayo, ukunciphisa ukungcangcazela, ukufunxa ingxolo, kunye nokuphucula umgangatho wokuphila. Ngokuvavanyo lwenkampani, ingxolo yokuhambisa amanzi engaphantsi kwama-decibel angama-49 kwimeko yokuphakama kwabahlali abanamabali amaninzi ngexesha elinye bekhupha izindlu zangasese.
Bonke Ubungakanani Hdpe Amanzi yokutyubhisha Pipe
Umbhobho oManzi oMnyama we-Hdpe
Umbhobho Hdpe Pipe
Umbhobho wamanzi wePayipi edityanisiweyo
Umjelo wamanzi ohambisa umbhobho wamanzi amdaka
Umbhobho wamanzi ashushu nabandayo e-PE-RT
Umgangatho we-PE-RT wombhobho wokufudumeza wobushushu
PVC bushing yombane
Umbhobho wokuhambisa amanzi we-UPVC
PP-R umbhobho wamanzi ashushu nabandayo